Wariye katirsan BBC-da oo loo heysto ‘gaf ay u geysatay’ Donald Trump | Biyoguurenews.com
Home Wararka Wariye katirsan BBC-da oo loo heysto ‘gaf ay u geysatay’ Donald Trump
Wariye katirsan BBC-da oo loo heysto ‘gaf ay u geysatay’ Donald Trump
Guddi qaabilsan dacwadaha loo soo gudbiyo BBC-da ayaa sheegay in Naga Munchetty ah weriye katirsan telefishenka BBC, qeybta la hadasha gudaha dalka Ingiriska ay jebisay xeerka BBC-da, kadib markii ay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku dhaleceesay cunsurinimo.
Bishii Luulyo ee sanadkan, barnaamij daadihiye Naga ayaa xilli ay tebineysya barnamaij toos ah, waxay aad ugu dheeraatay hadal uu Trump jeediyay, kaas oo ahaa in dadka ka soo horjeedo siyaasadihiisa ay ku laabtaan halkii ay asal ka yimaadeen.
BBC-da waxaa ay sheegtay in gabadha weriyaha ah ay xaq u leedahay inay soo bandhigto fikirkeeda, balse ay ka talaabsatay nidaamkii u yaalay hay’adda, waxaana ay intaa raaciyeen in tallaabada laga qaado dib laga soo sheegi doona.
Afhayeen u hadlay BBC-da ayaa sheegay in inkastoo Munchetty ay xaq u leedahay inay ka hadasho hadalkii Trump ee ahaa in dadka ka soo horjeeda siyaasadahiisa ay dib ugu laabtaan dalalka ay ka soo jeedaan, hadana marka la fiiriyo shuruucda hay’adda, ay ka tallaabsatay nidaamka u degsan BBC-da.
Hadalladii ay maskaxdeeda kala timid Naga
Mar Munchetty jeedineysay barnamaijka BBC Breakfast 17 kii Luulyo ee sanadkan, xiligaas oo Madaxweyne Trump uu jeediyay hadal dadka qaar ay dhibsadeen ayaa Munchetty waxaa ay hawada ka sheegtay “Marwalba oo la I dhaho dumar aan caddeyn ayaad tahay ee dib ugu laabo halkii aad ka timid, waxaan u arkaa inay tahay cunsurinimo”.
“Hadda cidna waxba kuma eedeenayo, balse ma ogtahay waxa hadaladaas oo kale ay ka dhigan yihiin”. Ayay telefishenka ka tiri Munchetty oo daadihineysay barnaamijka BBC Breakfast.
Munchetty waxaa kale oo ay sheegtay inay aad uga carootay hadalkaas, waxaana ay intaa raacisay in dad badan oo ku nool dalka Ingiriiska laga yaabo in sidaas oo kale ay dareemaan.
“Waxaan dareemi karaa in dad badan oo ku nool dalkan ay sidaas oo kale uga caroodaan in qof taagan heerkaas uu u hadlo sidaas, isagoon eegeyn luuqadda uu adeegsanayo,” ayay raacisay.
Hadalka ay jeedisay gabadha weriyaha ah ayaa yimid, kadib markii Madaxweyne Trump uu jeediyay hadal ah in dhamaan dadka ka soo horjeedo siyaasadihiisa oo ay kamid yihiin Ilhaan Cumar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley iyo Rashida Tlaib ay ku laabtaan dalalkii ay ka yimaadeen, si waxa ay doonayaan inay kusoo biiriyaan Mareykanka ay marka hore ka sameeyaan dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan.
“May ku laabtaan halkii ay ka yimaadeen oo ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ka jira,” sidaas ayuu bartiisa Twitter ka ku qoray Donald Trump oo ay aad isu hayaan siyaasiyiin ay kamid tahay Ilhaan Cumar.
Qaar kamid ah weriyeyaasha BBC-da ayaa aad uga soo horjeestay go’aanka ay soo saareen qeybta dacwadaha ee BBC-da.
Barnaamij daadihiye Carrie Gracie oo horay u ahayd tifatiraha laanta Shiinaha, kana tagtay shaqada BBC-da, sababa la xiriira sinaan la’aan dhanka mushaarka ee ragga iyo dumarka ka shaqeeyaa BBC-da ayaa sheegtay in hadalkii Trump ay aad u dhibsadeen weriyeyaal badan, waxayna ugu baaqday guddiga in ay fahfaahiyaan go’aanka ay qaateen.
Dad qaar ayaa weriye Munchetty ku tagaeeray hadalkan ay jeedisay.
Guddiga qaabilsan dacwada BBC-da ee loo soo gaabiyo ECU ayaa waxaa kale oo ay shegeen in hadalkii ay jeedisay gabadha ee ah in falkii Trump ay ku dheehan tahay cunsurinimo uu baalmarsan yahay qawaaniinta u degsan BBC-da, ayna dhageysteen dacwdada laga soo gudbiyay arrintan.
Guddiga ayaa intaa raciyay in nuxurka go’aanka guddiga lagu daabici doonaa bogga dacwadaha ee BBC-da, ayna soo raacin doonaa qoraal ay ku sheegayaan tallaabada laga qaadi doonaa weriyaha, iyadoo laga duulayo waxyaabihii ay ku arkeen eedaha loo jeediyay.
Xildhibaan ka tirsan xisbiga shaqaalaha, David Lammy ayaa go’aanka guddiga ku tilmaamay mid lala yaabo, sidoo kale arrintan dadka ka hadlay ayaa waxaa kamid ah weriye Kevin Maguire oo sheegay in aysan ahayn maalin wanaagsan.
Wakiil u hadlay Munchetty waxaa uu sheegay in aysan diyaar u ahayn in arrintan ay ka hadasho.
Previous articleWasiirka wasaarada hanacsiga somaliland o Daboolka ka qaday in ay jirto warqada sheegaysa in digniin loogu diray shirkadihii shidaalka keni jiray
Next articleWafti sare o Somaliland ah o Martiqaad ka Hellay Madaxawynaha Uganda